Khabiirka Cimilada ah wuxuu qeexayaa Adeegga Kaydinta Wanaagsan ee Wanaagsan
Horumarinta sayniska iyo teknoolojiyada, habka ganacsigu u hanan karo adduunka cajiib ah. Maalin kasta, farsamooyinka cusub ee xogta la xoqdo ayaa la soo saaray, abuurista saameyn weyn oo ku saabsan shirkadaha iyo ururinta xog sax ah oo laga helo bogagga shabakadda ee aasaasiga ah iyo kuwa sare. Maqnaanshaha xogta ama macdanta macdantu waxay ka caawisaa kordhinta fursadaha ganacsiga. Waxaan si fudud u saadaalin karnaa suuqa suuqyada iyadoo si habaysan loo habeeyey oo loo qaabeeyey.
Waa Maxay Saanqaadayaasha?
SiteScraper waa macluumaad wanaagsan oo la tirtiro ama qalab macdan qodaya oo ku haboon suuqa suuqyada, khubarada warbaahinta bulshada, iyo ganacsiyada. Qalabkan, waxaad fahmi kartaa badeecadaha iyo khayraadka ku jira baahida iyo in aad kor u qaadi karto ganacsigaaga ilaa xad. SiteScraper waxaa lagu heli karaa labada lacag oo bilaash ah iyo qiimo lacageed. Freeware waxay leedahay tiro xaddidan oo xaddidan, laakiin qorshaha lacagta caymiska ayaa furi doona sifooyinka kala duwan ee aan laga yaabo inaadan ka helin adeeg kale oo macdanta kale. Qaar ka mid ah sifooyinka caanka ah ee ka dhigaya SiteScraper doorashada ugu fiican ayaa lagala hadlayaa hoos.
1. Waxay ka caawisaa in la ogaado qaababka xogta
Si ka duwan sida xogta kale ee caadiga ah u goosan ama adeegyada macdanta qodista, SiteScraper waxay si caqligal ah u aqoonsaneysaa qaababka xogtaada oo waxay ku siinaysaa macluumaad wanaagsan oo laga soo qaato bogag internet kala duwan. Mid ka mid ah yoolalka ugu muhiimsan ee lagu horumarinayo SiteScraper waa inaad ka tirtiri karto xogta bogagga aad jeceshahay iyada oo aan wax isdhexgal ahayn maadaama qalabkani uu si toos ah hawlaha u qabsado oo uusan u baahneyn inaad leedahay xirfadaha barnaamijyada qaar.
2. Waxay xambaarsantahay liiska kala duwan ee heerarka kala duwan
SiteScraper waa mid ka mid ah kuwa yar yar ee xogta iyo xayiraadaha qalabka macdanta ee qodaya qaybaha kala duwan iyo liiska goobaha si habboon. Waxay ka dhigan tahay inaad adeegsan kartid qalabkan oo aad xoqayso xogta looga baahan yahay eBay iyo dukaamada Amazon-sida internetka. Waxaad sidoo kale bartilmaameedsan kartaa safarrada safarka iyo website-yada wargeysyada ee SiteScraper waxayna abuuri karaan liisas iyo qaybo xogtaada la xoqay iyadoon wax arrin ah. Muujinta Qaybaha Qaybta ayaa faa'iido u leh soo saarida macluumaadka alaabta ee qaybo kala duwan oo ka mid ah dukaamada iibka ee internetka.
3. Raadi ereyada muhiimka ah
Muuqaalka muhiimka ah ee SiteScraper wuxuu kuu fududeynayaa inaad sameysid raadinta oo aad hesho keywords ku haboon marka macluumaadkaaga la xoqay. Taas macnaheedu waa xogta la soo saaray waxay yeelan doontaa culeysyo muhiim ah iyo weedho kuwaas oo ka caawin kara darajo ama muujiyaan goobtaada si habboon.
5. Waxay si qarsoodi ah u shaqeyneysaa serverka wakiilada
Iyadoo SiteScraper, waxaad xoqin kartaa xogtaada adigoo u ogolaanaya aduunka in uu aqoonsado ama aqoonsado cinwaankaaga IP. Qalabkani wuxuu si qarsoodi ah u shaqeyn karaa iyada oo loo marayo serverkiisa wakiilkiisa oo wuxuu hayaa cinwaankaaga HIP, isaga oo ku siinaya nabadgelyo iyo qarsoodi dhamaystiran halka macluumaadka la jarayo. Waxaad kala dooran kartaa noocyo kala duwan oo server ah si aad u qarisid cinwaankaaga IP-ga oo aad hubiso ammaankaaga internetka iyo ilaalintaada Source .